200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 N’Golo Kante Oo Daaha Ka Qaaday Shaqsigii Ku Qanciyey Inuu Kusoo Biiro Kooxda Chelsea | UfeynNews.com
N’Golo Kante Oo Daaha Ka Qaaday Shaqsigii Ku Qanciyey Inuu Kusoo Biiro Kooxda Chelsea
Jul 17, 2016 - jawaab
Saxiixa cusub ee Chelsea N’Golo Kante ayaa daaha ka qaaday inuu doortay ku biirista kooxda ka dhisan Stamford Bridge ka dib markii uu go’aankaas ku qanciyey tababare Antonio Conte.
Xiddiga heerka caalami ee dalka France ayaa Sabtidii dhammeystiray heshiis 30 milyan oo ginni oo uu uga soo tegay Leicester City isla markaana uu ku noqday saxiixii labaad ee uu xagaagaan sameeyo Conte tan iyo markii uu yimid kooxda ka dhisan Galbeedka London.
Xiddigii hore ee qadka dhexe ee kooxda Caen ayaa u mahadceliyey Leicester iyo taageereyaasheeda fursaddii ay u siiyeen inuu ka ciyaaro horyaalka England Premier League ka hor inta uusan ammaanin qorshaha tababare Conte uu isugu deyayo inuu dib usoo celiyo awooddii Chelsea.
“Xilli ciyaareedkaan waxaan horyaalka Premier League la qaaday FC Leicester,”ayuu ku qoray bayaan uu soo dhigay bartiisa Twitter. “Waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo hogaamiyeyaasha, asxaabteydii aan isku kooxda aheyn iyo tababare Claudio Ranieri ka dib xilli ciyaareedkaan fantastik ah ee aan ku guuleysanay horyaalka England.
“Kalsoonidoodii iyo sidoo kale kalsoonidii taageereyaasha ayaa abid ku jiri doona xusuusteyda. Waxaana markale doonayaa inaan u mahadceliyo dhammaantood. Bilowga xilli ciyaareedka 2016 illaa 2017 waxaan doortay inaan ku biiro Chelsea FC. Waa koox xoogan oo keensatay tababare weyn isla markaana dooneysa inay gaarto heer sarre anna waan la wadaagayaa.
“Mashruuca kooxdaan iyo hadalkii tababare Conte ayaa igu qanciyey inaan ku biiro kooxdaan cutub cusub ayeyna nolosheyda iyo xirfaddeyda kubadda cagta u tahay.”